TSL ထုတ်ကုန်များသည် SET Expo 2019 ၌နောက်ဆုံးပေါ်အသံစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အသံလွှင့်ခြင်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြေရှင်းမှုများကိုတင်ပြသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » TSL ထုတ်ကုန်များသည် SET Expo 2019 ရှိနောက်ဆုံးပေါ်အသံစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အသံလွှင့်ခြင်းထိန်းချုပ်ခြင်းစနစ်ဖြေရှင်းမှုများကိုတင်ပြသည်
ဆောပိုလို, ဘရာဇီး, သြဂုတ်လ 20, 2019 - TSL ထုတ်ကုန်များ, ထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ဒီဇိုင်နာနှင့်ထုတ်လုပ်သူ, စနစ်များကိုပေါင်းစပ်မိတ်ဖက်လိုင်း Up ကိုတွဲပြီး, SET ကုန်စည်ပြပွဲ 2019 မှာ၎င်း၏နောက်ဆုံးပေါ်အသံနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဖြေရှင်းချက် feature ပါလိမ့်မယ်။ TSL က၎င်း၏ SAM ကို-မေးပလက်ဖောင်း, Pam-IP ကိုနှင့်၎င်း၏ MPA1 လိုင်းများအပါအဝင်ယင်း၏အသံစောင့်ကြည့်မှုဟာယယဇ်ပူဇော်ဖို့ updates များကိုမီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ၎င်း၏အသစ်က IP ကိုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy အဖြစ်တစ်စုံတစ်ရာ Interface ကိုသေတ္တာ၏အကွာအဝေးတခုအဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
TSL လည်းယင်း၏ Pam-အိုင်ပီလိုင်းနဲ့ audio နဲ့ video စောင့်ကြည့်မှုထက် ကျော်လွန်. က၎င်း၏ကျယ်ပြန်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမှ updates များကို feature ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ PAM2-IP ကို ​​compressed လုပ်မထားတဲ့ဗွီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်နိုင်စွမ်းနှင့်အဘို့အအသံဖိုင်ဖြစ်ပါသည် SMPTE 2022-6 နှင့် SMPTE 2110 ကွန်ရက်များ။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအသံကျယ်တိုင်းတာခြင်း, အပြည့်အဝ Configure လုပ်လို့ရတဲ့မီတာနှင့် Multi-ရုပ်သံလိုင်းစောင့်ကြည့်ရေးတို့ပါဝင်သည်။ IP ကိုအခြေခံအဆောက်အအုံများအတွင်းအစွန်း device ကိုထိန်းချုပ်မှု၏အရေးပါမှုကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း, ဖောက်သည်များယခုသူတို့ရဲ့ Pam-IP ကိုအသံမော်နီတာတွေနဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့ဖြစ်စေ '' In-Band 'သို့မဟုတ်' 'Out-of Band' 'ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦး TSL သို့မဟုတ် 3rd ပါတီထိန်းချုပ်မှုစနစ်အားအသုံးပြုခြင်းသည် Pam-IP ကိုဖွငျ့ ST-2110 နှင့် ST-2022-6 multicast subscriptions ကိုယခုမီးတောက် + NMOS သို့မဟုတ် TSL ၏ကိုယ်ပိုင်အသံ API ကို protocol ကို အသုံးပြု. ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ဒီထောကျပံ့ဖို့, အသစ်သော Pam-IP ကိုဝက်ဘ်စာမျက်နှာအားလုံးအနေနဲ့ IP ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများအတွင်းအသံနှင့်ဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်သည့်အခါယုံကြည်မှုများကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်, PTP status ကိုနှင့် IP packet ကိုကောင်တာအတူပေးသွင်းပြီးခံရသည့်သတင်းရပ်ကွက်၏ဝေးလံခေါင်သီ status ကိုစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေးစွမ်းသည်။
ဒါ့အပြင် SET မှာပြသလျက်ရှိသည့် MPA1-SOLO-MADI နှင့် MPA1-SOLO-Dante များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသံမီတာအဖြစ်အားလုံး MPA1 အသံမော်နီတာများအတွက် SNMP မှတဆင့်တိုးတက်ထိန်းချုပ်မှုစွမ်းရည်အပါအဝင်ယင်း၏ MPA1 အသံစောင့်ကြည့်မှုအကွာအဝေး၏နောက်ဆုံးဖြန့်ချိကြလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကားယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းမော်နီတာယုံကြည်မှုနှင့်အတူအသံစောင့်ကြည့်ဖို့အဆုံး-အသုံးပြုသူများကို enable ။
ယင်း၏လုပ်ငန်းအဆင့်ကိုထိန်းချုပ်ပလက်ဖောင်းအပြင်, SET မှာဖောက်သည်များလျင်မြန်စွာနှင့်ကုန်ကျစရိတ်-ထိထိရောက်ရောက်အော်ပရေတာပေးမယ့်သီးခြားဖြေရှင်းချက်အဖြစ်အသုံးပြုသို့မဟုတ် Third-party စနစ်များနှင့်အတူပေါင်းစည်းနိုင်သည့်, Self-ပါရှိသောထိန်းချုပ်မှုစနစ်များ TSL ရဲ့အကွာအဝေးအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မည် သူတို့အသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကျော်လိုအပ်ထိန်းချုပ်မှု။ ဒီအကွာအဝေးအတွင်းက IP ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy, မည်သည့် GPI / O- ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အစွမ်းထက်သေးကျစ်လစ်သိပ်သည်းစနစ်, Serial- နှင့် IP-enabled ကိရိယာဖြစ်သည်။ တဦးတည်းမှလေးခလုတ်ကနေချုံ့ချဲ့ခြင်း, IP ကိုထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ပြီး Buddy / off'-စတိုင်လုပ်ရပ်များအပေါ် '' ရိုးရှင်းပြီးလုပ်ဆောင်သို့မဟုတ်ရှုပ်ထွေး salvos ဖြစ်ပေါ်, နှင့်၎င်း၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရွယ်အစား flyaway ပစ္စည်းများနှင့်အမြန်-စာနယ်ဇင်းထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများကိုပြုလုပ်ရန်စုံလင်သောစေသည်နိုင်ပါတယ်။ မည်သည့်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး application များအတွက် configuration ကို 'ပရိုဂရမ်မာ-အခမဲ့' 'web browser ကိုအတူလွယ်ကူသောလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် AIB-4 SET ကုန်စည်ပြပွဲမှာပြသလျက်ရှိ။ ဘယ်နေရာမှာမဆို Interface ကိုသေတ္တာ (AIBs) ၏ကုမ္ပဏီရဲ့အကွာအဝေး, ရေဒီယို, အထူးသ A / V ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲစက်မှုဇုန်နှင့်တီဗီအသံလွှင့်ဈေးကွက် segments များနှင့်အသုံးပြုသူများကိုစနစ်များကိုပေါင်းကူးနှင့်မည်သည့် programming ကိုဖျော်ဖြေခြင်းမရှိဘဲအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြုထားပါသည်။ device ကိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် interface ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အဘို့, AIB အခန်းဆက် AIB-16 လည်း Ethernet, 4-လမ်း DTMF နှင့် dial-up modem ပေးအတူ2GPI / OS နဲ့မျိုးစုံ device ကိုထိန်းချုပ်လမ်းကြောင်းမှတက်ပေးထားပါတယ်။ သူတို့ကိုသင်လိုအပ်လေရာရာ၌အဆိုပါ AIBs သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး GPIs နှင့်လယ်သို့တွင်-Air ကို Tally - အဝေးမှသင့်အိမ်စက်ရုံထဲကနေ - မြို့ကြီးများ, ပြည်နယ်နှင့်ပင်တိုက်ကြီးကိုဖြတ်ပြီး။
အကြောင်းအရာ TSL ထုတ်ကုန်များ
30 နှစ်ကျော်အဘို့, TSL, cable နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်အတွင်းစစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းဖို့အစေခံကြောင်းထုတ်လွှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုအကွာအဝေးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စျေးကွက်, ဒီဇိုင်းကမ္ဘာ့ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်နဲ့ content ဖန်တီးသူနှင့်တိုက်ရိုက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ထားပါတယ် ဂြိုဟ်တု, IPTV နှင့် IT industries ။ အသံစောင့်ကြည့်မှု, ထုတ်လွှင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့်အာဏာစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အထူးပြု, TSL က၎င်း၏ဖြေရှင်းချက်ကျေနပ်အောင်နှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်များနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကူညီဝင်ငွေ generate နှင့်စစ်ဆင်ရေးချောမွေ့ဖို့အိုင်တီ-based နှင့်ရိုးရာ Workflows အတွက်တည်ရှိသော, စီးပွားဖြစ်နည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်လိုအပ်ချက်များကိုကျော်လွန်ကြောင်းသေချာ။
audio အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor ပေါင်းစည်းမှု interface ကို MPA1 အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် Pam-အိုင်ပီ SAM ကို-မေး SET ကုန်စည်ပြပွဲ 2019 လှံ & Arrows TSL ထုတ်ကုန်များ တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းနည်းများ 2019-08-20
ယခင်: အငယ်တန်းပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်နာ -2တစ်နှစ်တာရဲ့အတွင်းပိုင်းဒီဇိုင်းအတွေ့အကြုံ
နောက်တစ်ခု: ရော်ဂျာနှင့် Big စက်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမပေါင်းကြေညာ